ED -ga gaashaaman ee ugu wanaagsan ee soo -saaraha iyo Warshadda | Civen
Qalabka biraha ee elektrolytigga ah ee gaashaan ee ay soo saartay CIVEN METAL wuxuu si wax ku ool ah u ilaalin karaa calaamadaha korantada iyo faragelinta microwave sababta oo ah daahirnimada sare ee naxaasta. Habka wax -soo -saarka elektrolytka wuxuu ka dhigayaa ballaca maaddada mid ka ballaaran 1.2 mitir (48 inji), taas oo u oggolaanaysa codsiyada dabacsan ee dhinacyo badan. Xadhigga naxaasku laftiisu wuxuu leeyahay qaab aad u fidsan waxaana si fiican loogu qaabayn karaa agabyo kale. Xadhigga naxaasku wuxuu kaloo u adkaysan karaa oksaydhka heerkulka sare iyo daxalka, taas oo u oggolaanaysa in loo adeegsado bay'adaha adag ama alaabooyinka nolosha maaddigu muhiim tahay.
CIVEN waxay bixin kartaa 1/4oz -3oz (dhumucda magacaaban 9μm -105μm) gaashaan -bireedka naxaasta elektrolytigga leh ballaca ugu badan ee 1290mm, ama qeexitaanno kala duwan oo gaashaan -bireedka naxaasta elektrolytigga ah oo dhumucdiisuna tahay 9μm -105μm sida waafaqsan shuruudaha macaamilka oo leh tayada wax soo saarka shuruudaha IPC-4562 heerka II iyo III.
Waxay leedahay iska caabin qoyaan wanaagsan, iska caabbinta kiimikada, tabinta kuleylka iyo iska caabinta UV, waxayna ku habboon tahay ka hortagga faragelinta korantada guurto ah iyo hirarka elektromagnetiga.
Inta badan la adeegsado: gudbiyeyaasha, fiilooyinka, taleefannada gacanta, kombiyuutarrada, caafimaadka, hawada sare, milatariga iyo alaabada kale ee elektiroonigga ah ee gaashaanka u ah.
Waxqabadka (GB/T5230-2000 、 IPC-4562-2000)
Heerka dullaysan ee HCΦ (18%-1hr/25 ℃)
Isbedelka midabka (E-1.0hr/200 ℃)
Albaabka dul sabaynaysa 290 ℃
Muuqaalka (Barta iyo budada naxaasta ah)
Gudaha Dhexroor 76mm/3 inch
Fiiro gaar ah: 1. Qiimaha Rz ee dusha guud ee bireedka naxaasku waa qiimaha xasilloonida imtixaanka, ee ma aha qiime dammaanad leh.
2. Xoogga diirka ayaa ah qiimaha imtixaanka guddiga FR-4 (5 xaashi oo ah 7628PP).
3. Muddada hubinta tayada waa 90 maalmood laga bilaabo taariikhda la helay.
Hore: RTF ED Foil Copper
Xiga: Super Thick ED Coils Foils
Bireed bireed Copper
Foil Copper Calendered
Ed -Copper Foil
Muraayadda Copper oo duuban
Muraayad-naxaas ah oo duuban